China Doro bhodhoro vagadziri uye vanotengesa | Hongning
Bhodhoro redu rakanaka igaba rakanaka kune rako Doro, mabhodhoro edu anogona kugadzirwa nekristaro chena uye yakachena michena zvinhu, kukurumidza kugadzirwa kutenderera, mhando yakanaka, tiri mutungamiri muindastiri yebhodhoro, tinovimbisa mhando.
Aya mabhodhoro egirazi regirazi matombo akasimba uye akasimba.
Nyore kutakura kuenda kumapati, misi, iyo yekurovedza muviri kana basa.
Usatya kuenda navo chero kupi.
Ruvara bhodhoro rakajeka, rakajeka.Iyo yakavharirwa ine chando yakajeka uye inopenya.
Material - Durable girazi regirazi, rakajeka kwazvo uye rakajeka.
Inosanganisirwa - girazi bhodhoro ine aluminium muvharo yekuona kushandiswa kwakazara kwezvinhu zvako.
Zvishandiso - Dururira waini yako yaunofarira mune ino yakanaka girazi bhodhoro.
Usatya kuenda navo.
Inogona kushandiswa pakuungana kwemhuri,
Chii chauri kumirira? Nakidzwa nekunakidzwa newaini!
Zita Girazi Bhodhoro
Simbiso mhando sikuruu chivharo, kork, dhonza-mhete
Industrial Use - Iyo 700ml bhodhoro regirazi resirosi zvakare yakasarudzika sarudzo ye xo, brandy, whiskey, vodka, tequila kurongedza. Iyo yakajeka girazi rinoonekera rinounza hunyanzvi kutarisa kune doro. Iyo inopfuura 20mm gobvu regirazi chigadziko mucherechedzo wemweya wakasarudzika.
Iyo Minimum Order Qty - Kuti tibatsire dzimwe dzichiri kubikwa mabheriri, isu tadzikisa 700ml bhodhoro regirazi sirasi shoma odha huwandu kubva pa10,000 kusvika 6,000 pcs, uye chengetedza mari yekufambisa yevatengi kuburikidza neLCL yekufambisa. Kana paine mabhodhoro emadoro egirazi, huwandu hweodha hunogona kuve mazana akati wandei, gumi.
Yakadzika Kugadzira - Isu takazvipira kupa vatengi neinyore-yekumira sevhisi. Tinogona kuita kudhinda, kuchando, kusanganisa magetsi, kumwaya bhodhoro redoro nedoro uye mamwe masevhisi mupaki yeindasitiri yatiri. Pane maminetsi mashanu chete kubva kumotokari kubva kumafekitori akasiyana ekugadzirisa. Isu takasarudza fekitori iri padhuze yekugadzirisa kudzora zvirinani uye nekupa yakaringana 700ml bhodhoro regirazi kune manyuchi kune vatengi
Pashure: Aluminium-Plastiki Dhonza Mhete Bhodhoro Cap
Zvadaro: Zvizorwa bhodhoro